Gadra 10 Taona Sy Kapoka 1000 Azon’ilay Mpisera Twitter Tao Arabia Saodita Noho Ny Fialany Amin’ny Finoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Febroary 2016 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Swahili, македонски, Ελληνικά, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Ratsy amin'ny lamosinao ny famahanam-bilaogy .. any Arabia saodita. Anisan'ny sary ampiasain'ny Amnesty International anairana amin'ny zava-manjò an'ilay bilaogera Saodiana Raif Badawi, voaheloka 10 taona an-tranomaizina sy kapoka karavasy 1000 ao Arabia Saodita tamin'ny 2014 noho ny fananganana tranonkala “liberaly” iray
Namoahan'i Arabia Saodita didim-pitsarana higadra 10 taona ny mpisera Twitter iray ankoatra ny kapoka karavasy 2000 atao aminy noho ny famoahana sioka 600 izay “mampiely atheisma” ao amin'ity habaka famahanam-bilaogy fohy ity.
Araka ny gazety Saodiana mivoaka isan'andro iray Al Watan dia nodidian'ny fitsarana iray ao Medina nanameloka azy noho ny fandavana ny fisian'Andriamanitra sy ny soratra masina, noho ny fiampangana ny mpaminany ho mpandainga ary noho ny faniratsirana ny Korany Masina ny mpisera Twitter iray, izay tsy navoaka ny anarany. Nosaziana ihany koa izy handoa onitra 20.000 Riyals (5300 dolara amerikana). Nosamborina ny lehilahy rehefa nanomboka nanara-maso ny kaontiny Twitter ny Vondrona Misoroka ny Heloka Bevavan'ny Fampitam-Baovao ao amin'ny Komitim-Pampiroboroboana ny Hasina sy Fisorohana ny Ditra na ny polim-pivavahana Saodiana.
Nampian'ny gazety fa niaiky ny tsy finoany an'Andriamanitra ilay lehilahy 28 taona tao amin'ny fitsarana ary nolaviny avokoa amin'ny fanononany ny zo halalaka hiteny ny ezaka rehetra hahatonga azy hibebaka. Nolazainy fa Miozolomana izy teo aloha ary efa niala amin'ny fivavahana rehetra izy ankehitriny rehefa nifandray tamin'ireo tranonkala mampiely ny atheisma ato amin'ny aterineto.
Nolazain'ny gazety fa nanaporofo ny fiampangana ilay lehilahy tamin'ny alalan'ny fiaikeny sy ny fijoroana vavolombelon'ny lehilahy efatra nilaza ho nahita ny kaonty Twitter-ny tamin'ny fidain'ilay lehilahy ny fitsarana, ary voaporofo fa misoratra amin'ny anarany ny servisy miasa amin'ny findainy.
Fanginana an-tserasera no setrin'ny didim-pitsarana, fa fifanakalozan-drohy maromaro tsy ahitana fanehoan-kevitra loatra miresaka ilay vaovao no mba hita.
Mampitandrina ireo Saodiana mpisera Twitter i Abdulrahman, avy ao Ejipta:
Izao i Arabia Saodita. Saodiana 28 taona voaheloka higadra 10 taona sy hokapohina karavasy 2.000 ary handoa onitra 20.000 Riyal noho ny fanehoana ny atheisma ao amin'ny Twitter.
Tokony hitandrina ireo mpiseraseran'ny media sosialy ao Arabia Saodita. Arahi-maso, enjehina ary rahonana ianareo izao. Sioka iray dia mety hampidi-doza ny fiainanao. Fiarahamonim-pihemorana sy tsy fahalalàna!
Araka ny lalàna Saodiana taona 2001 dia voasazin'ny lalàna “izay rehetra manitsakitsaka ny fotokevi-dehibe na ny lalàna, na ny fandikana ny fahamasinan'ny Islam sy ny zavatsoa vitan'ny Shari’ah, na ny famakiana ny fahamendrehana imasom-bahoaka”. Tamin'ny 2014, ny fitondram-panjaka mandala ny nentin-drazany, dia namoaka lalàna henjana izay, lazain'ny Human Rights Watch [Mpanaramaso ny Zon'Olombelona], ho mametraka ho heloka bevava “hitovy amin'ny fampihorohoroana izay eritreri-panoherana na fanehoan-kevitra misintaka rehetra.” Ny andininy voalohany amin'ny lalàna dia mamariparitra ho fampihorohoroana ireo :
Fiantsoana hanana eritreritra tsy finoana an'Andriamanitra amin'ny endriny rehetra, na ny fiantsoana hanontany mankany amin'ny fitsipahana ny fototry ny fivavahana islamika izay iorenan'ny firenena.
Tamin'ny Mey 2014, nisy fitsarana adiheloka bevava tao Jeddah nanameloka [mg] ny blaogera Raif Badawi higadra 10 taona am-ponja sy hokapohina in-1000 amin'ny karavasy noho ny “fanopana ny Islam”. Nampangaina noho ny fandrafetana ny “Arabo Saodiana Liberaly”, dinika an-tserasera iray navoakany tamin'ny 2008 miady hevitra amin'ny anjara toeran'ny fivavahana ao amin'ny firenena i Badawi .
Avy eo ity lehilahy 32 taona ity nodidiana handoa onitra iray tapitrisa riyals (tokotokony ho 266.600 dolara amerikana). Na dia teo aza ny fanentanana iraisampirenena ho famotsorana azy, dia mbola any am-ponja i Badawi. Tamin'ny Janoary 2015 izy novelezina in-50 amin'ny kapoka 1.000 mbola nahemotra ny fanantanterahana azy. Nahemotra ny fotoam-pikapohana azy fanindroany noho ny faharisarisan'i Badawi.